Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Peru War Cusub » Dhulgariir xooggan oo M6.1 ah ayaa ku dhacay Gobolka Xuduudda Peru iyo Ecuador
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Ecuador • News • Peru War Cusub • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Meelahaas, dhulgariir halis ah oo dhulgariir ah ayaa ka dhacay iyada oo ay suuragal tahay in uu waxyeelo u geysto dhismayaasha iyo kaabayaasha kale waxyeello dhexdhexaad ah ilaa mid culus.
Dhulgariirka ayaa ka dhacay meel u dhow Sullana.
Dhulgariirka ayaa laga dareemay Peru iyo Ecuador
Wali lama soo sheegin wax khasaare ah ama waxyeello ah.
Dhulgariir xooggan oo cabirkiisu yahay 6.1 ayaa ku dhuftay meel u dhow Sullana, Provincia de Sullana, Piura ee dalka Peru.
Dhulgariirku wuxuu ku dhuftay qoto dheer oo 10 km ka hooseysa xuddunta u dhow Sullana, Provincia de Sullana, Piura, Peru, duhurkii Jimcaha 30ka Luulyo 2021 saacaddu markay ahayd 12:10 pm waqtiga maxalliga ah. Dhulgariirrada dhaadheer ayaa la dareemayaa si ka xoog badan kuwa ka qoto dheer markay u dhow yihiin dusha. Baaxadda saxda ah, xuddunta, iyo qotada dhulgariirka ayaa laga yaabaa in dib loo eego saacadaha ama daqiiqadaha soo socda iyadoo khubarada seismologga ay dib u eegayaan xogta oo ay sifeynayaan xisaabintooda.
Laba warbixinood oo ay soo saartay Xarunta Cilmi-baadhista Jarmalka ee Geosciences (GFZ) iyo Xarunta Seismological European-Mediterranean Seismological Center (EMSC) ayaa lagu qoray dhulgariirka inuu ahaa 6.1.
Iyadoo lagu saleynayo xogta hordhaca ah ee dhulgariirka, waxay ahayd in dhulgariirka uu dareemo qof walba oo ku sugan aagga xuddunta. Meelahaas, dhulgariir halis ah oo dhulgariir ah ayaa ka dhacay iyada oo ay suuragal tahay in uu waxyeelo u geysto dhismayaasha iyo kaabayaasha kale waxyeello dhexdhexaad ah ilaa mid culus.
Gariir dhexdhexaad ah ayaa laga yaabaa inuu ka dhacay Sullana (pop. 160,800) oo ku yaal 15 km u jirta xudunta, Querecotillo (pop. 25,400) 16 km, Marcavelica (pop. 25,600) 18 km, Tambo Grande (pop. 30,000) 24 km, Piura (pop. 325,500) 28 km, San Martin (pop. 130,000) 29 km, Catacaos (pop. 57,300) 38 km, iyo Chulucanas (pop. 68,800) 47 km.